Microsoft ga-azụta Discord | Gam akporosis
Microsoft na-achọ ịzụta Discord maka ijeri dollar 10.000
Ọ nwere ike ịmasị ya Microsoft na-achọ inweta Discord, ngwa izi ozi raara onwe ya nye egwuregwu (ọ bụ ezie n'oge na-adịbeghị anya dabara adaba maka ebumnuche ndị ọzọ), maka ijeri dollar 10.000 dị ka Bloomberg kwuru.
A chat ngwa na enweela ike iwepụ ndị ọzọ n'ọrụ maka ịdị irè ya na n'ihi otu o si dị mfe ịnụ ụtọ atụmatụ ndị ngwa ndị ọzọ dị ka Discord gafere site na ndebanye aha akwụ ụgwọ.
1 Nke mbu, gini bu Ogbaaghara?
2 Microsoft na-aga Discord maka ijeri dollar 10.000
Nke mbu, gini bu Ogbaaghara?
Maka onye emeghi gi igwu egwuruegwu ole na ole na egwuru-egwu intaneti ebe inoro na obodo nke ndị na-egwu egwuregwu, ma ọ bụ naanị na ọ nweghị ndị ọrụ ibe ya na onye ọ na-esonyere egwuregwu iji gafere njigide, aghụghọ, nkuzi ma ọ bụ naanị ịme GIF ma ọ bụ vidiyo iji nwee ezigbo oge, n'ezie na Discord nwere ike ịbụ onye ọbịa zuru oke.
Ma ee Microsoft na-achọ ịdaba ijeri dollar 10.000Ọ bụghị maka ihe ọ bụla, mana n'ihi na anyị na-eche nnukwu ngwa yana n'ihi na ọ nwere ọtụtụ ndị ọrụ zuru ụwa ọnụ.
A mụrụ nghọtahie dị ka ebe nzukọ maka ndị na-egwu egwuregwu vidio afọ ole na ole gara aga Dịka ọmụmaatụ, naanị otu ụzọ iji jikọọ ndị egwuregwu otu agbụrụ, site na ọgbakọ ma ọ bụ ngwa olu ndị ahụ dịka TeamServer karịrị afọ 15 gara aga.
Enweghi ike inwe ngwa nke emere maka izipu ozi maka egwuru-egwu, mere ka amara ya nke oma na obere oge. Site na ahịrị anyị ka anyị mere ka amata na 2016, ma mmalite nke ọha na eze bụ na 2015. Ya mere, anyị na-ekwu maka ngwa eji arụ ọrụ 6 afọ gara aga na 2021 nwere ike ree maka nnukwu ego ahụ.
Ezie, Ewezuga inye nkata olu VoIP, nkata vidiyo na ederede ederede, ọ na - eweta oke ahụmịhe iji mepụta obodo ndị dị n'ịntanetị nke isiokwu ọ bụla ekele nye ndị otu na njirimara niile ahụ ọ na-enye. N’ezie, ịnwe ngwà maka ngwa ekwentị ọ bụla ma ọ bụ PC nke anyị nwere ike iji mepụta ọnụ ụlọ ọdịyo ma ọ bụ vidiyo na nke onye ọ bụla ga-esonye ya n’ụzọ dị mfe, bụkwa akụkụ nke ihe ịga nke ọma ya.
Microsoft na-aga Discord maka ijeri dollar 10.000
Awa ole na ole gara aga anyị mụtara na Microsoft ga-adịrịrị na mkparịta ụka iji nweta Discord Inc. maka ihe karịrị ijeri dollar 10.000. Ọbụghị oge mbụ ụfọdụ ndị isi hụrụ Discord n'anya.
Ihe dị mkpa nghọtahie were maka ụlọ ọrụ dịka Microsoft bụ n'ihi na n'oge ọrịa a na-efe efe, ewepụ na-abawanye ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ raara onwe ha nye egwuregwu, O mekwara ya maka ụdị ndị ọrụ ndị ọzọ dịka otu ọmụmụ ihe, klaasị ịgba egwu, klọb agụ na nzukọ dijitalụ ndị ọzọ.
Ka anyị kwuo na ọ bụrụ na Mbugharị abụwo eze maka oku vidiyo, Mkparịta ụka abụwo maka ndị otu ahụ ma e wezụga ọdịyo ma ọ bụ vidiyo site na oku ahụ, a chat dịkwa mkpa ịkọrọ njikọ, ederede, echiche, nzukọ, nkata na ọtụtụ ndị ọzọ.
Maka Microsoft ọ nwere ike ịnye nnukwu uru na onyinye Gamer Pass, ebe ọ nwere Microsoft Otu maka ndị ọkachamara, Skype maka iji ojiji vidiyo vidiyo na Discord maka egwuregwu; Ọ bụ ezie na ngwa ahụ na-arụ ọrụ nke ọma, ọ ga-eju anyị anya na afọ ndị na-abịanụ site na ọtụtụ ndị ọrụ nke ụdị ntụrụndụ niile na-esonye ya.
Ugbu a ichere ma ọ bụrụ na ọrịre ejedebe na ezigbo njedebe maka Discord na Microsoft ma anyị nwere ike ikwu na e reela ya maka $ 10.000 ijeri obere oge mgbe nke ikpeazụ a zụtara Zenimax Media Inc maka $ 7.500 ijeri (ndị nwe Akwụkwọ mpịakọta okenye na mbibi, ma ọ bụ Bethesda Softworks).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Microsoft na-achọ ịzụta Discord maka ijeri dollar 10.000